သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်ခြင်းပုံစံ – Gentleman Magazine
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်ခြင်းပုံစံ
သင် ညဘက် ဘယ်လိုပုံစံ အိပ်ပါသလဲ??ကွေးကွေးလေးလား?? မှောက်ရက်လား?? စစ်သားတွေလို သတိဆွဲပြီး အိပ်တာလား?? သင် အိပ်တဲ့ပုံကို သင့်ဘာသာ သတိထားမိဖို့ ခက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင် အိပ်တဲ့ ပုံစံက သင့်ကျန်းမာရေးကို အကျိုး သက်ရောက်စေပါတယ်။ ညောင်းတာ ကိုက်တာကစပြီး အိပ်မပျော်တာထိ ဖြစ်စေမှာပါ။
အိပ်တဲ့ ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အကျိုး ရှိစေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အိပ်တဲ့ပုံစံကတော့ ပက်လက်နဲ့ ဘေးစောင်းပါ။ ကိုယ်ဝန် ရှိမနေရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းစောင်း အရေးမကြီးပါဘူး။ အဲဒိပုံစံတွေဟာ ကျောရိုးကို သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပြီး အကြာကြီးအိပ်စက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဘေးစောင်းအိပ်တဲ့သူတွေဟာ ညပိုင်း တစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲပြီး နိုးလာတာ မဖြစ်တတ်ကြပါဘူး။ တခြားပုံစံနဲ့ အိပ်သူတွေထက်စာရင် ကိုက်ခဲမှု နည်းပါးပါတယ်။
ပက်လက်ပဲ အိပ်တတ်ရင်တော့ ဒူးအောက်မှာ ခေါင်းအုံး တစ်လုံး ခံထားခြင်းဟာ ကျောရိုးကို ဖြောင့်တန်းနေစေလို့ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပါတယ်။ လက်တွေကတော့ ခေါင်းပေါ် တင်ထားမယ့်အစား ဘေးချထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ပက်လက်အိပ်သူတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ဟောက်တတ်ခြင်းပါ။ အရမ်းဟောက်တဲ့ ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေကို ဒီပုံစံနဲ့ မအိပ်ဖို့ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်ကြားထားကြပါတယ်။
ဘယ်ညာ စောင်းပြီး အိပ်ရင်တော့ အပေါ်မှာ ထားမယ့် ခြေထောက်ကို နည်းနည်းကွေးပြီး ဒူးနှစ်လုံးကြားမှာ ခေါင်းအုံးတစ်ခုလောက် ညှပ်ထားပါ။ အဲဒါဟာ တင်ပါးဆုံးရိုးကို တည့်မတ်နေစေပြီး လိမ်မသွားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒူးနှစ်ဖက်ကိုတော့ လုံးဝထိမထားအောင် ရှောင်ပါ။ အရေပြားကို ထိခိုက်စေလို့ပါ။
အိပ်ဖို့ အဆိုးရွားဆုံး ပုံစံကတော့ မှောက်ရက်ပါပဲ။ ကျောရိုးဟာ ကွေးနေရပြီး ဇက်ကို ကွေးညွတ်ထားမှ အသက်ရှုနိုင်တာကြောင့် ၁၅ မိနစ်အတွင်း ကိုက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ လူအများစုဟာ အဲဒိပုံစံအတိုင်း အိပ်နေကြတာပါ။ မွေးကင်းစ ကလေးအရွယ်က အမေတွေက သူတို့ ကလေးတွေကို မှောက်အိပ်ခိုင်းနဲ့ အကျင့်ဟာ လူကြီး အရွယ်ထိ ပါလာတာကြောင့်ပါ။
အဲဒိပုံစံနဲ့ မအိပ်မိစေဖို့ မအိပ်ခင် ဗိုက်မှာ ကုလားပဲစေ့ တစ်ခြမ်း တိပ်နဲ့ကပ်ပြီး အိပ်ပါ။ မှောက်လိုက်တာနဲ့ မသက်မသာဖြစ်လာလို့ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ဘာသာ ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အိပ်ရာတွေကလဲ အိပ်စက်တဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။အိပ်ရာဟာ ပျော့ပြောင်းနေမှ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျောရိုကို သက်သာစေတာပါ။ ဘေးတိုက်အိပ်တဲ့အခါလဲ ခေါင်းအုံး ပျော့မှ ဇက်မညောင်းစေတာပါ။
သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ အကောငျးဆုံး အိပျစကျခွငျးပုံစံ
သငျ ညဘကျ ဘယျလိုပုံစံ အိပျပါသလဲ??ကှေးကှေးလေးလား?? မှောကျရကျလား?? စဈသားတှလေို သတိဆှဲပွီး အိပျတာလား?? သငျ အိပျတဲ့ပုံကို သငျ့ဘာသာ သတိထားမိဖို့ ခကျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ အိပျတဲ့ ပုံစံက သငျ့ကနျြးမာရေးကို အကြိုး သကျရောကျစပေါတယျ။ ညောငျးတာ ကိုကျတာကစပွီး အိပျမပြျောတာထိ ဖွဈစမှောပါ။
အိပျတဲ့ ပုံစံ ပွောငျးလဲခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးကို အကြိုး ရှိစပေါတယျ။ အကောငျးဆုံး အိပျတဲ့ပုံစံကတော့ ပကျလကျနဲ့ ဘေးစောငျးပါ။ ကိုယျဝနျ ရှိမနရေငျ ဘယျဘကျကို စောငျးစောငျး အရေးမကွီးပါဘူး။ အဲဒိပုံစံတှဟော ကြောရိုးကို သကျတောငျ့သကျသာ ရှိစပွေီး အကွာကွီးအိပျစကျတဲ့အခါ အဆငျပွစေပေါတယျ။
ဘေးစောငျးအိပျတဲ့သူတှဟော ညပိုငျး တဈကိုယျလုံး ကိုကျခဲပွီး နိုးလာတာ မဖွဈတတျကွပါဘူး။ တခွားပုံစံနဲ့ အိပျသူတှထေကျစာရငျ ကိုကျခဲမှု နညျးပါးပါတယျ။
ပကျလကျပဲ အိပျတတျရငျတော့ ဒူးအောကျမှာ ခေါငျးအုံး တဈလုံး ခံထားခွငျးဟာ ကြောရိုးကို ဖွောငျ့တနျးနစေလေို့ ပိုပွီး သကျတောငျ့သကျသာ ရှိစပေါတယျ။ လကျတှကေတော့ ခေါငျးပျေါ တငျထားမယျ့အစား ဘေးခထြားတာ အကောငျးဆုံးပါ။
ပကျလကျအိပျသူတှရေဲ့ အားနညျးခကျြကတော့ ဟောကျတတျခွငျးပါ။ အရမျးဟောကျတဲ့ ရောဂါ ခံစားနရေသူတှကေို ဒီပုံစံနဲ့ မအိပျဖို့ ဆရာဝနျတှကေ ညှနျကွားထားကွပါတယျ။
ဘယျညာ စောငျးပွီး အိပျရငျတော့ အပျေါမှာ ထားမယျ့ ခွထေောကျကို နညျးနညျးကှေးပွီး ဒူးနှဈလုံးကွားမှာ ခေါငျးအုံးတဈခုလောကျ ညှပျထားပါ။ အဲဒါဟာ တငျပါးဆုံးရိုးကို တညျ့မတျနစေပွေီး လိမျမသှားအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒူးနှဈဖကျကိုတော့ လုံးဝထိမထားအောငျ ရှောငျပါ။ အရပွေားကို ထိခိုကျစလေို့ပါ။
အိပျဖို့ အဆိုးရှားဆုံး ပုံစံကတော့ မှောကျရကျပါပဲ။ ကြောရိုးဟာ ကှေးနရေပွီး ဇကျကို ကှေးညှတျထားမှ အသကျရှုနိုငျတာကွောငျ့ ၁၅ မိနဈအတှငျး ကိုကျခဲလာပါလိမျ့မယျ။ လူအမြားစုဟာ အဲဒိပုံစံအတိုငျး အိပျနကွေတာပါ။ မှေးကငျးစ ကလေးအရှယျက အမတှေကေ သူတို့ ကလေးတှကေို မှောကျအိပျခိုငျးနဲ့ အကငျြ့ဟာ လူကွီး အရှယျထိ ပါလာတာကွောငျ့ပါ။
အဲဒိပုံစံနဲ့ မအိပျမိစဖေို့ မအိပျခငျ ဗိုကျမှာ ကုလားပဲစေ့ တဈခွမျး တိပျနဲ့ကပျပွီး အိပျပါ။ မှောကျလိုကျတာနဲ့ မသကျမသာဖွဈလာလို့ ခန်ဓာကိုယျက သူ့ဘာသာ ပုံစံပွောငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
အိပျရာတှကေလဲ အိပျစကျတဲ့ ပုံစံကို ပွောငျးလဲစပေါတယျ။အိပျရာဟာ ပြော့ပွောငျးနမှေ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ကြောရိုကို သကျသာစတောပါ။ ဘေးတိုကျအိပျတဲ့အခါလဲ ခေါငျးအုံး ပြော့မှ ဇကျမညောငျးစတောပါ။
Previous: ကုမ္ပဏီကထွက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဘယ်လို တည်ထောင်မလဲ
Next: ရှပ်အကျီင်္ ၀တ်မယ်ဆိုရင်